Izipho Ezengeziwe Ezihamba Ngangaphandle Ongayithenga Esikhungweni Sezindiza
Ukuhlela Uhambo Ukuhamba emoyeni
by UBenet Wilson
Izipho Thatha Ukuvala
Isikhathi siqinile futhi asikho isikhathi esanele sokuthenga izipho kubangani nomndeni. Izikhumulo zezindiza ziye zawela imidlalo yazo yokudayisa, zinikeza ngemikhiqizo ejwayelekile njenge-Victoria's Secret kanye nezitolo zokugcina ezifana no-Burberry, kanye nabathengisi bendawo nendawo. Nazi ezinye imibono yesipho esithunyelwe ngaphambilini futhi ngezansi kukhona izinto ezingavamile ezithengiswayo ezikhungweni zezindiza.
I-George Bush Intercontinental Airport
Ukukhishwa kwemakethe ye-canvas. Isithombe sihlonipha iNewton Supply Company
U-Austin, abalingani baseNewton Supply Company aseTexas abasebenzisa izikhali ezivulekile ezingenzi inzuzo, wadala ukunikeza abesifazane ababaleki ngokuzinikeza imisebenzi ngemali ephilayo. Laba besifazane badala izinto eziyingqayizivele kuhlanganise nalokhu okukhishwa ngesandla, okuphelele ukuhamba nokusetshenziswa kwansuku zonke. Ukuthole ku-Terminal E ezitolo ze-Cibo eduze kweGates 10 no-24.
I-Dallas / Fort Worth International Airport
Isithombe sihlonipha isitolo se-DFW Abasebenzi
Lesi isitolo esikhethekile kuphela kubathandi bezindiza. Kutholakala ngeSango C2 ku-Terminal C, linikeza izinto ze-logo ze-carrier yase-American Airlines ne-American Eagle. Kodwa futhi ithwala izinto ezivela ezinkampanini ezihamba phambili, ezihlanganisa iTWA, iReno Air, iMelika West kanye ne-US Airways, kanye nama gear avela kumalungu e- Oneworld .
I-Austin-Bergstrom International Airport
Isithombe sihlonipha i-Amy's Ice Creams
Noma iyiphi i-Texan ewufanele ukasawoti yayo iyazi nge-Ice Creams ka-Amy, edayisa imikhiqizo yamaqhwa ama-super premium ayenziwe ngezandla, izithelo ze-milk and free yogurt. Kunezindawo eHouston, eSan Antonio nase-Austin, kufaka phakathi isikhumbuzo sezindiza. Ungakhuphuka u-ayisikhilimu ayisishiyagalombili e-ayisikhilimu epakishwe kakhulu ukuze uhambe ekhaya uma ushiya i-Austin.
I-Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
I-Pralines evela eHartsfield-Jackson's Savannah Candy Kitchen. Isithombe se-Savannah Candy Kitchen
Uma kungenzeka ukuthi ube nesikhathi sokubulala ku-Concourse B noma C, isikhala se-Savannah Candy Kitchen. Awukwazi ukuhamba ngokungafanele ukukhetha noma yikuphi komnikelo wabo, kodwa ama-veterans asezindiza ayazi ukuthi ama-pralines esitolo - okungcono kakhulu ngaphandle kwe- New Orleans - yinto yokuthenga. Ungabathenga ngamatayela wesipho noma ngezipho. Noma iyiphi indlela, kuyoba okumnandi.
I-Chicago O'Hare International Airport
Isithombe sihlonipha amaNuts on Clark
Awukwazi ukuhamba kule sezindiza ngaphandle kokuthenga i-popcorn kusuka kumaNuts ku-Clark. Zine-flavour ezintathu: original, caramel kanye noshizi. Ungabathenga ngabanye noma njengomxube. Kukhona nezinhlobonhlobo ze-nati ezimbozwe nge-chocolate.
I-John F. Kennedy International Airport
Icala le-LuMee iPhone. Isithombe esihle nge-Amazon
"Ukuphathwa kwezokuThutha kwezokuThutha kunxusa ukuthi ungagcini izipho ngaphambi kokuba uhlole ukuhlolwa kwezokuphepha kwezindiza. Ku-OTG, sisho ukuthi 'awudingi ngisho nokuthenga izipho zakho ngaphambi kokuba uhlole izikhumulo zezindiza," kusho u-Eric Brinker, okhekela umongameli wezehlakalo. I-OTG, eqondisa ukuvunyelwa kwe-JFK Terminal 2. I-Tech esitolo ithengisa i-LuMee Two ye-iPhone 7/6 / 6s. Yingxenye ye-smartphone yokuqala yokunikeza izibani ezibhekene ne-LED ezibhekene naso, okunikeza ukukhanyisa okuphelele kwe-selfies kanye nengxoxo yevidiyo. , nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi. Uhlelo lwesibili luzofanelana ne-iPhone 7, 6s, noma 6 yakho.
I-Seattle-Tacoma International Airport
Isithombe sihlonishwa yi-Sub Pop Records
I-Independent irekhodi lenkampani i-Sub Pop Records ibhekwa njengomunye wabaholi ema-1990s ukugubha umculo wokunyakaza, ukuhlakulela umculi onjengoNirvana, Mudhoney, Soundgarden, kanye ne-TAD ekuqaleni kwesikhundla sabo. Le nkampani inesitolo esiteshini se-Central Terminal sezindiza lapho bethengisa izinto kufaka phakathi umculo, izembatho, izincwadi, ubuciko, nezinto zokuhamba ezigubha indima yerebula yerekhodi ePacific Northwest.
I-Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport
Isithombe sihlonipha ama-Popsations
I-Popsations yinkampani ye-gourmet popcorn yendawo esekelwe eNkantolo Yokudla ye-A / B ye-terminal. Bakha ama-popcorns ahlukahlukene amnandi ahlukene, kepha intandokazi yendawo "i-Crabby Caramel," ukuxuba kwe-caramel kanye nezintandokazi zendawo zakudala ze-Old Bay spice.
I-Ronald Reagan Washington National Airport
Isithombe nguDavid J. Buerk
Ngenxa yokuthi awuzange uyifake kumnyuziyamu waseSmithsonian ngenkathi uvakashela i-Capitol yesizwe akusho ukuthi awukwazi ukuthatha isikhumbuzo esitholile kule esiteshini sezindiza. Isipho esisodwa esihle kakhulu lezi zincwadi ezinganeni mayelana nomuzi nezindiza. Ungabuye futhi uthenge izinto ezifana nobucwebe, amapenki akhethekile we-inki nobuciko.
I-Charlotte Douglas International Airport
Isithombe sihlonipha i-HMSHost
Imakethe ye-1897 iyinhlanganisela yokudla nokudayiswa okugxila kulokho okutholakala nasezindaweni ezizungeze i-Queen City. Indawo yezimakethe ibonisa izinto ezipholile ezihambayo abahambayo bangathenga ukuthatha kancane esifundeni kanye nabo ohambweni lwabo. Isipho esisodwa se-mixologist empilweni yakho i-Jack Rudy Cocktail Mixers yase-South Carolina esekelwe e-South Carolina, efaka isiraphu ye-grenadine encane, efaka ijusi lamapomegranate, ushukela lomhlanga namanzi e-orange orange.
I-Jetport yase-Portland International
Isithombe esihloniphekile sezinhlanzi zasolwandle
Isikhumulo sezindiza esedolobheni elikhulu kunawo wonke saseMaine sisekhaya le-DownEast Marketplace, elikhombisa izimpahla ezenziwe ngaphakathi. Enye yalezi yizikhwama zasolwandle, ezakhiwa izikhwama ze-tote kanye nezesekeli ezenziwe emanzini avuselelwe. Imiklamo ihlanganisa ama-lobster, impilo yasolwandle, nezinye izinto eziphefumlelwe ngokuzibulala.
I-Miami International Airport
Isithombe sihlonipha uMaru nabangane
Isitolo seMaru no-Friends sinezidakamizwa ezihlukahlukene ezihlukahlukene, ezihlukahlukene ezihlukahlukene ezivela kumculi uDeanna Effner. Idoli yase-Raven Afrika-America inezici zobuso ezinjengezinwele ze-hazel, izinwele ezimnyama kanye nesembatho sezinwele ezimbili zekhanda lesikhumba kanye nesikhwama somshini wokubopha.
I-San Francisco International Airport
Isithombe sihlonishwa yi-DFS
Izitolo ze-DFS ezingenamsebenzi zinikeza izingcezu ezimbili zobucwebe ezitholakalayo kuphela esikhumulweni sezindiza: i-Bvlgari 18 ye-carat i-golden pendant kanye nesongo elifanayo elenziwe nguMama wePearl, i-Carnelian neParé Diamonds.
I-Airport Yase-Raleigh-Durham International
Isithombe sihlonipha ama-Holly Aiken Bags
Izikhwama zokugqoka ziyisipho esithandwayo ngoba zingasetshenziselwa konke kusukela ngezimpelasonto ukuya ezitolo zokuthenga. Ama-Holly Aiken Bags aseRaleigh ase-Raleigh athengiswa esitolo sezindiza, Marshall-Rousso. I-Turbo Aerial yindawo encane ye-vinyl enezinhlangothi ezinwebezelayo futhi ihlanganiswe ngokugcwele, enezikhwama ezimbili zangaphakathi.
Izindiza Zezindiza Ezihlukahlukene
Isithombe esihle nge-BodyworksBall
I-BodyworksBall isetshenziswe ku-"O List" ye-Oprah, i-Yahoo Health ne "The View" showvishini. Kuyinto ithuluzi self-massage enikeza impumuzo for crick entanyeni, amaqabunga amahlombe kanye ukuphuka izandla nezinyawo. Futhi kuyindlela yokudambisa ngemuva kokuhlala ezindizeni ezindala. Itholakala ezitolo zezindiza ze-Brookstone ne-Made In America.
Pet Birds and Air Travel: Okudingeka Ukwazi
I-Cheers ne-Jeers: I-Jeers ye-10 ye-Air Travelers ephezulu
10 Izindiza Zezindiza Ezinkulu Zokuphuma Uma Une-Layover
Izinto ezimangalisa ezitholwe yi-TSA ngo-2016
Izindiza Zomhlaba Neziqondile ezivela eSan Jose Airport Airport (SJC)
4 Tech Innovations Yenza Airports Better
Funda ngoNkulunkulukazi ongumGreki u-Artemis
Izinto Ezamahhala Ezokuzenzela eNingizimu Dakota
Amazwe Ombuso Wobuciko
Izindawo zokudlela eziphezulu zaseQuebec City zabahambi abahamba phambili
Ukusuka eJutland kuya eBelfast - UHMS Caroline
Ukuhambela Ukuhamba Nge-West Village eNew York City
Izindawo zokungcebeleka eziseMetro Detroit-Skiing
Izindawo ezihamba phambili nezokuvakasha eVancouver Island, BC
I-Savannah Gay Guide - Savannah 2016-2017 Ikhalenda Lemicimbi
Usuku lwe-Valentine eScandinavia
I-Viking Star Cruise Ship Profile
Ukuhamba Okukhulu EHash House Ukuya Las Vegas
I-Beverly Hills Trolley Tours
Iviki lezokudla laseMontreal 2018: Le Ukuzijabulisa Kwenzeka